Vao nandre ny poa-basy ny Zandary, izay tsy lavitra teo, dia namonjy avy hatrany ny toerana nitrangan’ny fanafihana saingy efa tsy tratra ireo jiolahy. Nizara roa ny dian’izy ireo ka ny andiany iray nitondra ny maratra teny amin’ny hopitaly, ary andiany iray kosa dia nanenjika ireo jiolahy.
Rehefa natao ny fanarahan-dia dia ny alarobia 20 martsa tokony ho tamin’ny telo ora maraina no tratra ny 04 tamin’ireo jiolahy ka ny 03 dia lehilahy ary vehivavy ny iray. Rehefa nanontaniana ny vadin’ilay mpivaronkena dia nanamarina fa nisy tamin’ireo jiolahy voasambotra no tsaroany ny endriny tamin’ny nanakana azy ireo teny ambony posy.
Ny alakamisy 21 martsa no nahasamborana ny jiolahy 04 hafa rehefa nanaovanan’ny Zandary vela-pandrika. Tafakatra 16 ny voasambotra rehefa niroso hatrany ny fanadihadiana sy ny fikarohana, ka vehivavy ny 04, ary ny 09 amin’ireo no nandray anjara mivantana, fa ny 07 kosa dia firaisana tsikombakomba.